Tag: modern marketer | Martech Zone
Ithegi: intengiso yanamhlanje
Sichukumise isiseko kunye nomthengi wakudala namhlanje ongakhange asebenze nathi kulo nyaka uphelileyo. Kunyaka ophelileyo, iinkampani ezininzi bezisebenzisa izixhobo zethu kuba besiphambi kwegophe kwizicwangciso zokusebenzisa ngokukhangela. Ngoku, ndiyakholelwa ukuba sityhala abathengi bethu beqhubeka nendlela eya kwizicwangciso zobutyebi bomxholo kunye nentengiso ezenzekelayo. Iyavuka, sikumkhondo ofanelekileyo. Ngokuka-Oracle Eloqua, itekhnoloji, ukuthengisa nge-imeyile, isantya kunye nomxholo osisityebi